Shantii mid kamid ah ardeyda ayaa meel ka dhac loogu gestey iskuulka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shantii mid kamid ah ardeyda ayaa meel ka dhac loogu gestey iskuulka
La daabacay tisdag 13 augusti 2013 kl 10.27
Tirokoob welwel leh. Ayada oo ay iskuulada bilaabanayaa asbuucyada fooda naagu soo haya ayaa waxaa jira warbaxin uu soo saaray ururka Friend kaas oo muujinaya in shantii mid kamid ah ardeyda meel ka dhac loogu geysto iskuulka.
Ardeydas oo ah iskugeyn 6000 oo ardey. Xoghayaha guud ee ururka Friends Lars Arrhenius ayaa ku tilmaamey arintaan in ay tahay dhibaato weyn oo bulsho oo aan cidna isku taxlujin in ay wax ka qabato.
- Waa dhibaato weyn aan cidna sidaas isku taxluujin wax ka qabadkeeda, ayuu yeri Lars Arrenius xoghayaha guud ee ururka Friends oo ah ururka ka shaqeeya ka hortaga cayda iyo kadeedka ilmaha iyo ardeyda loo geysto.
Warbaxinta Friends ayaa ku dhisan macluumad ay ka soo aruuriyeen ardey iyo caruur gaareysa 36 698 oo ka jawaabey su’aalo la xiriira cayda iyo meel ka dhaca. Macluumad aruurintan uu uururka sameeyey intii u dhaxeysey xilli iskuuladka 2012-2013. Ardeyda su’aalahan ka jawaabey ayaa dhigta inta u dhaxeys fasalka sadexaad illa fasalka sagaalaad. Boqolkii 17 kamid ah ardeyda ayaa sheegey in kalo kulmeen meel ka dhac ardeyda kale ee ay iskuulka isla dhigtaan, halka boqolkii 7 kamid ahi ardeydaas ay sheegeen in ay meel ka dhaca kalo kulmaan shaqaalaha iskuulkooda.
Sidoo kale waxaa warabixinta ururka lagu sheegey in meel ka dhaca iyo cayda ay ardeydo iskugu geystaan ay tahay ayadana dhibaato sidoo kale soo badananeysa. Ku dhawaad sagaal kamid ah ardeyda su’aalaha ururka ka jawaabey ayaa sheegey in sawir ama film ay ku jiraan lagu baafiyey internet ogalaanshahooda la’aanteed. Sidoo kale boqolkii 30 ayaa sheegey in aysan heysanin qof qaan gaar ah oo ay ku kalsooyinhiin oo ay lahadli karaan hadii dhibaato loogu geysto internetka.
Mel ka dhaca ardeyda la kulmaan ayuu Lars Arrenius xoghayaha guud ee ururka Friend ku micneeyey in ay ka koobanyahiin cay, aflagooda, xadgudubyo garaacis iyo takoorid.